युट्युबमा म्युजिक भिडियोको करोड भ्युज पुग्दा कति कमाइ ? - Naya Aawaj
युट्युबमा म्युजिक भिडियोको करोड भ्युज पुग्दा कति कमाइ ?
३० कार्तिक, काठमाडौं । पहिले गीत कति हिट र त्यसबाट कति आम्दानी भयो भनेर क्यासेट बिक्रीलाई आधार बनाइन्थ्यो । म्युजिक कम्पनीले क्यासेट बिक्री गरेको आधारमा गायक/सर्जकले रोयल्टी पाउँथे । अहिले गीत हिटको मापन र आम्दानीको मुख्य स्रोत युट्युब बनेको छ । धेरै कलाकारहरुले युट्युब च्यानल खोलेर आफ्ना गीत आफ्नै च्यानलमा अपलोड गर्ने गरेका छन् ।
युट्युबमा हरेक दिनजसो नयाँ-नयाँ गीत सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । धेरै गीतहरुले राम्रो भ्युज भने पाउन सकिरहेका हुँदैनन् भने केही गीतले श्रोता/दर्शकको मन जित्दै युट्युबमा राम्रो भ्युज पाइरहेका हुन्छन् । ती गीतहरुले लगानी कटाएर नाफा गरिरहेका हुन्छन् ।
एक साताअघि मात्रै ‘रमरम मरौटी’ बोलको गीतको भिडियोले युट्युबमा एक करोड भ्युज पार गर्‍यो । सार्वजनिक भएको एक महिनाको अवधिमा खेम सेञ्चुरी र अस्मिता अधिकारीको स्वर, पूजा शर्मा र ओबी रायमाझीको अभिनय रहेको यो गीतको भिडियो ‘ओबी रायमाझी’को आफ्नै युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक भएको हो ।
त्यस्तै, एक साताअघि नै ‘पिपल छेउमा बर’ बोलको गीतको भिडियोको भ्युज एक करोड पुग्यो । गत वर्ष सार्वजनिक भएको प्रविशा अधिकारी र रोशन सिंहको स्वर तथा विमल अधिकारी र अनु शाहको अभिनय रहेको यो गीतको भिडियो मोडल विमल अधिकारीको म्युजिक कम्पनी ‘भावना म्युजिक सोलुसन’ मार्फत सार्वजनिक गीत हो ।
यी दुई गीत पछिल्लो समय करोड क्लबमा प्रवेश गरेका केहि गीतहरु हुन् । यसअगाडि दर्जनौं गीतले युट्युबमा करोड भ्युज पार गरिसकेका छन् ।
युट्युबमा गीतको भ्युज १ करोड हुँदा कमाई कति हुन्छ ? लगानीकर्ताहरुका अनुसार युट्युबबाट हुने आम्दानीमा एकरुपता हुँदैन । ‘रमरम मरौटी’ले एक करोड भ्युज पुग्दा कति आम्दानी गर्‍यो ? लगानीकर्ताले नखुलाएपनि ‘पिपल छेउमा वर’बाट झण्डै पाँच लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको विमल अधिकारीले बताए । म्युजिक भिडियोमा युट्युबको कमाइबारे भने, ‘नोभेम्बर–डिसेम्बरमा गुगल विज्ञापन बढी हुने हुँदा यी महिनामा अपलोड गरेका भिडियोबाट अलि धेरै आम्दानी हुन्छ । जनवरीपछि फेरि युट्युबबाट हुने आम्दानी घट्छ ।’ त्यस्तै, कुन देशबाट बढी हेरियो भन्ने कुराले पनि आम्दानीमा फरक पार्ने उनको भनाइ छ । नेपालबाट भन्दा विदेशबाट धेरै हेरिएको भिडियोको आम्दानी बढी हुन्छ ।
‘केन्द्र मोसन पिक्चर्स’बाट सार्वजनिक भएका केही गीतले करोड बढी भ्युज पाएका छन् । जसमध्ये ‘आँखामा आउने सपनी’ले १ करोड ६० लाख भ्युज पाउँदा ८ लाख आम्दानी भएको ‘केन्द्र मोसन पिक्चर्स’का म्यानेजर सागर लामिछानेले जानकारी दिए । ‘यति भ्युज जाँदा यति आम्दानी हुन्छ भन्ने हुँदैन । दर्शकले भिडियो कति मिनेट हेरे भन्नेमा भर पर्छ । ४ मिनेट र ८ मिनेटका दुई भिडियोले एक करोड भ्युज पाएका छन् भने ८ मिनेटको भिडियोबाट आउने आम्दानी बढी हुन्छ,’ लामिछानेले भने ।
केन्द्र मोसन पिक्चर्सबाट सार्वजनिक भएका ‘फुलबुट्टे सारी’, ‘टाढा भएपनि’ गीतको भिडियोको आम्दानी नखुलाइए पनि यी गीतबाट राम्रो आम्दानी भएको लामिछानेले बताए । उनले भने, ‘यति भन्छु, ती गीतले अन्य ७–८ वटा म्युजिक भिडियो बनाउन पुग्ने आम्दानी गरे ।’ ‘फुलबुट्टे सारी’ले सोमबार दिउँसोसम्म युट्युबमा ७ करोड १२ लाख बढी भ्युज पाएको छ भने ‘टाढा भएपनि’को भ्युज ४ करोड ८३ लाख बढी छ ।
गायक एवं निर्देशक सरोज वलीको ‘गज्जब टीभी’ मार्फत सार्वजनिक केही म्युजिक भिडियोले करोड बढी भ्युज पाएका छन् । सरोज पनि म्युजिक भिडियोबाट आउने आम्दानीबारे ठ्याक्कै भन्न नसकिँने बताउँछन् । उनले भने, ‘कुनै गीत करोड पटक हेरिँदा थोरै आम्दानी भएको छ । कुनै गीतबाट भने एकदमै राम्रो आम्दानी भएको छ ।’
उनले दुई गीतको आम्दानीबारे उदाहरण दिँदै भने, ‘मायालु तिमी कता छौ’ गीत १ करोड १२ लाखले हेर्दा ३ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी भएको छ । ‘माया गरौंला’ भन्ने गीत १ करोड ७० लाखले हेर्दा १० लाख रुपैयाँ आएको छ ।’ उनले लामो र छोटो समयको भिडियोले आम्दानीमा फरक नपार्ने बताउँदै भने, ‘लामो भिडियो पनि दर्शकले कति मिनेट हेर्छन् भन्नेमा भर पर्छ । भिडियो लामो छ, तर दर्शकले थोरै मात्र हेरे भने आम्दानी पनि थोरै हुन्छ ।’
भारतकै सबैभन्दा महँगा हिरो प्रभासको अहिलेसम्मकै बढी पारिश्रमिक
अमेरिकामा ‘मेरो भ्वाइस कप’ र ‘मेरो डान्स कप’ हुँदै
ब्राजिलका यी मोडलले गरे एकसाथ ९ युवतीसँग विवाह!
नेपाली कथानक चलचित्र “तिम्रो हुने कहिले” को टेलर रिलिज
नेपाली कथानक चलचित्र “तिम्रो हुने कहिले” मंसिर ३ गते रिलिज हुँदै